SEO के हो? खोज इञ्जिन अनुकूलन १०१ - Semalt सल्लाह
के तपाइँ खोज इंजनहरू मार्फत तपाइँको वेबसाइटमा अधिक आगन्तुकहरू आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ? तब तपाइँको वेबसाइट अनुकूलन, खोजी इन्जिन अनुकूलन भनिन्छ, एक सबै भन्दा कुशल र दिगो अनलाइन मार्केटि sustain रणनीति हो। यो तपाइँको अनलाइन मार्केटिंग रणनीतिको सुरूवात बिन्दु हो, एक उच्च स्थिति द्रुत रूपमा दसौं वा दिनको सयौं आगन्तुक उत्पन्न गर्दछ। तर खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसनको साथ तपाईं एक राम्रो स्थानमा केन्द्रित गर्नुहुन्न तर धेरै। अवश्य पनि, तपाई खोजी खोजी १ मा मात्र फेला पार्न चाहानुहुन्न, तर समानार्थी शब्द पनि। एसईओ को एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु यो लामो अवधि को उद्देश्य हो। अब पुग्ने पोजिसनले भविष्यमा फाईदा राख्नेछ।
अनलाइन अपरेट गर्ने वा अनलाइन आगन्तुकहरूमा निर्भर हुने धेरै कम्पनीहरूले एसईओ प्रयोग गर्दछन्। तिनीहरू सम्बन्धित कुञ्जी शब्दहरूबाट ट्राफिक प्राप्त गर्न चाहन्छन्। हामी तपाइँलाई SEO के हो र कहाँ सुरू गर्ने भनेर ठीकै बताउनेछौं।
यस एसईओ लेखमा, अधिक वेबसाइट आगंतुकहरूलाई लक्षित गर्दै, हामी महत्त्वपूर्ण तत्वहरूमा केन्द्रित हुनेछौं जुन तपाईंको व्यवसायलाई अधिक जैविक ट्राफिक प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
SEO र SEA बीच भिन्नता
SEO को बाहेक, तपाईं प्राय: SEA र SEM भरि पनि आउँनुहुन्छ। यी तीन धेरै समान छन् तर अझै फरक छन्।
SEO: खोज इञ्जिन अनुकूलन: खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसन, केवल जैविक खोजी परिणामहरूको चिन्ता गर्दछ।
SEA: खोज इञ्जिन विज्ञापन: खोजी ईन्जिन मार्फत विज्ञापनको चिन्ता गर्दछ। यो तरिका तपाईं पनि गुगलमा शीर्ष भुक्तान गरिएको विज्ञापन मार्फत। विज्ञापन गुगल ऐडवर्ड्स र बिंग विज्ञापन मार्फत गरिन्छ।
SEM: खोज इञ्जिन मार्केटिंग: SEM SEO र SEA को छाता गतिविधि हो।
त्यसोभए तपाईले दुई तरिकाहरूमा सुरू गर्न सक्नुहुन्छ भुक्तान गरिएको खोज परिणामहरू वा नि: शुल्क जैविक खोज परिणामहरूको माध्यमबाट।
खोज इञ्जिन अनुकूलन भनेको के हो?
खोज इञ्जिन अनुकूलन वा एसईओ। यदि तपाईं यसलाई शाब्दिक रूपमा अनुवाद गर्नुहुन्छ भने, यसको मतलब खोजी ईन्जिन अप्टिमाइजेसन हो। यो विधि मार्केटर्स द्वारा खोजी ईन्जिनहरूबाट आउँदो ट्राफिक उच्च पदहरूमा पुग्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। अप्टिमाइजेसनको साथ सुरू गर्न, तपाईंले पहिले केहि प्रश्नहरू, समस्याहरू र आवश्यकताहरू पहिचान गर्नुपर्दछ। तपाईका ग्राहकहरु के खोज्दैछन्? तिनीहरू कहाँ अवस्थित छन्? आदि त्यसपछि तपाईं यी उत्तरहरूसँग काम गर्न थाल्नुहुन्छ। अब तपाईं आफ्नो वेब पृष्ठहरू अनुकूलन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईंको (सम्भावित) ग्राहकहरूको खोजी क्वेरीमा आधारित।
तपाईले बुझ्नुहुने छ, SEO भनेको तपाईंको लक्षित श्रोतालाई तपाईंको वेबसाइटमा पुग्न मद्दत गर्ने बारेमा हो। तपाईं ज्ञान, अनुभव, ब्लगहरू, र सुझावहरू साझा गरेर यो गर्न सक्नुहुनेछ। र एसईओ को फाइदा, यो नि: शुल्क हो, तपाईंको वेबसाइटको प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्दछ, र दीर्घकालीन परिणामहरूमा केन्द्रित गर्दछ।
कसरी एक खोज इन्जिन काम गर्दछ?
गुगल जस्ता खोज ईन्जिनले जवाफ दिने मेसिनको रूपमा काम गर्दछ। तपाईले खोज क्वेरी/प्रश्न प्रविष्ट गर्नुभयो र गुगलले सब भन्दा सान्दर्भिक उत्तर देखाउँदछ। तर एक सान्दर्भिक उत्तर प्रदान गर्न, खोज इञ्जिनले पहिले सबै सम्भावित उत्तरहरू के हुन सक्दछ भनेर जान्नुपर्दछ।
गुगलले इन्टरनेटमा सबै सार्वजनिक सामग्री स .्कलन गरेर गर्छ। उदाहरण को लागी, खोज इञ्जिनले क्रॉलरहरूको प्रयोग गरेर पृष्ठहरू नक्शा गर्नेछ। यी रोबोटहरू हुन् जुन पृष्ठमा अनुक्रमणिका गर्नको लागि तपाईंको वेबसाइटमा आउँदछन्। बोटहरूले पृष्ठ पढ्छन् र गुगलको एल्गोरिथ्मको अनुसार, यो निर्धारण गरिन्छ कि पृष्ठ कति खोजीमा प्रासंगिक छ।
गुगलमा उच्च हुनु भनेको कम्पनीहरूको अन्तिम लक्ष्य हो र निश्चित रूपमा यसमा संलग्न बजारहरू पनि। तपाईं किन कारण शीर्षमा हुन चाहन्छु स्पष्ट, अधिक यातायात, र तपाईंको उत्पादन वा सेवा खोजिरहेका ग्राहकहरू प्राप्त गर्न सजिलो छ। तर पनि किनकि हामी अल्छी छौं र पहिलो पृष्ठ पछाडि हेर्दैनौं। पहिलो परिणाम पछि तपाईले गाह्रो फरक पार्नुभयो, त्यसैले नम्बर १ स्थानको लागि जानु महत्त्वपूर्ण छ!
गुगलको मिशन कथनले ती कसरी कार्य गर्दछ र कसरी तपाइँ यसलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न मद्दत गर्दछ:
"हामी सबैको लागि विश्वको जानकारी स collect्कलन गर्न चाहन्छौं र यसलाई केवल एक क्लिकले सबैको लागि पहुँचयोग्य बनाउँदछौं। यसका साथै हामी प्रयोगकर्तालाई प्रासंगिक उत्तर सहित गुणात्मक अनुभव प्रस्ताव गर्दछौं।"
यो एक व्यवसाय को रूप मा प्रासंगिक हुन महत्वपूर्ण छ। तर तपाईं कसरी यो बन्न सक्नुहुन्छ? तपाईं यो अनौंठो सामग्री प्रस्ताव गरेर र वेबसाइटमा गुणवत्ता प्रदान गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अद्वितीय सामग्री केवल पाठ भन्दा बढि जान्छ। Google ले Google नक्सा, छविहरू, भिडियोहरू, किनमेल, समाचार, आदि प्रयोग गर्दछ।
सिक्ने वा आफैलाई आउटसोर्स गर्ने?
के तपाइँ आफैँ एसईओको जटिलताहरू सिक्न र कार्यान्वयन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ वा तपाइँ यसलाई आउटसोर्स गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? एक SEO विशेषज्ञ तपाइँको वेबसाइट अनुकूलन मा राम्रो छ र यसबाट आउने परिणामहरूलाई अधिकतम पार्दै। तर के तपाई एक उद्यमीको रूपमा पनि यो सिक्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो वेबसाइटलाई अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ? यसको लागि जाने सब भन्दा द्रुत र उत्तम तरिका भनेको एसईओ कोर्स लिनु हो। तर नबिर्सनुहोस्, प्रतिलिपि अधिकार, वेब डिजाइन, लिंक निर्माण, कुञ्जीशब्द अनुसन्धान, रूपान्तरण अप्टिमाइजेसन, र Google एनालिटिकल र खोज कन्सोल जस्ता बिभिन्न उपकरणहरूको प्रयोग जस्ता धेरै सीपहरूको आवश्यक पर्दछ।
एसईओ कोर्स तपाईलाई सक्दो चाँडो आधारभूत कुराहरू सिकाउन डिजाइन गरिएको हो। सबै छोटो, संक्षिप्त, र व्यावहारिक। त्यहाँ धेरै अनलाइन छन्। तपाईं पनि एक कार्यशाला अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो व्यावहारिक छैन। SEO धेरै व्यापक र जटिल छ। तपाईंले केहि घण्टा र अभ्यासमा आवश्यक ज्ञान र सीप प्राप्त गर्नुहुने छैन। अन्तमा, तपाई आफैं अनलाइन अनुसन्धान गरेर एसईओ सिक्न सक्नुहुन्छ। यो मार्गले सब भन्दा लामो लिन्छ, तर तपाइँ निश्चित रूपमा SEO राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। यसको एक नुकसान यो हो कि यो धेरै समय खपत हुन्छ र तपाईं खस्न र फेरि उठ्न सिक्नुहुनेछ।
यद्यपि धेरै मानिसहरुलाइ शंका छ कि उनीहरु आफैंले SEO गर्न सक्छन् वा आउटसोर्स गर्न सक्छन्। साना परिवर्तनहरू र अप्टिमाइजेसनहरू आफैंलाई पूरा गर्न सजिलो हुन्छ, तर अझै पनि विशेषज्ञसँग काम गर्न सुझाव दिइन्छ।
यदि तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु वा यहाँ सम्म कि ब्यावसायिक कार्ड ट्रयाक गर्न को लागी एक नयाँ कार्यक्रम चाहानुहुन्छ, त्यसोभए तपाईले पनि यसको लागी कोर्स गर्नुहुन्न? तपाईं सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ Semalt मा विशेषज्ञहरु, र तिनीहरूले यसको ख्याल राख्नेछन्। किन? किनभने ती विशिष्ट छन् र लागतहरू कम छन् यदि तपाईंले आफैंलाई यो पत्ता लगाउनु पर्छ भने।
यदि तपाईंसँग अझै शंका छ भने, तपाईं निम्न जानकारी पढ्न सक्नुहुन्छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाइँले समर्थन छनौट गर्नु भएको छ।
गुगलको एल्गोरिदम लगातार परिवर्तन हुँदैछ र दुर्भाग्यवस, अनुकूलन गर्न कुनै प्रशिक्षण छैन। तपाइँ एसईओ संग निरन्तर काम गरेर यसको जवाफ दिन सिक्नुहुन्छ। एसईओ विशेषज्ञहरु वेबसाइटहरू अप्टिमाइज गर्न र पत्ता लगाउन सजिलो बनाउने तरिकाहरू पत्ता लगाउन दिन र दिन व्यस्त छन्। सुझाव र युक्तिहरू जुन अनलाइन छन् चाँडै पुरानो पुरानो हो र अब कार्य वा पछाडि आगो छैन। एसईओ संग अनुभवहीन नभएको एक उद्यमीको रूपमा, यी चीजहरू बुझ्न र पछिल्लो घटनाक्रम र सर्तहरूको साथ अप टु डेट राख्न गाह्रो छ।
तपाईको क्षेत्रमा विशेषज्ञ
तपाईं एक उद्यमी वा कम्पनीको कर्मचारी हो र तपाईं के मा राम्रो हुनुहुन्छ। तपाईं विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उदाहरणका लागि, कानुनी सल्लाह प्रदान गर्ने वा टेलर-मेड समाधान इत्यादि प्रदान गर्ने। एसईओ विशेषज्ञ पनि केहि राम्रो हुन्छ। अर्थात् गुगलमा अप्टिमाइजेसन र तपाईंको खोजनीयता सुधार गर्ने। के तपाई अझ राम्रो हुन चाहानुहुन्छ? त्यसोभए तपाईं यो पेशामा विशेषज्ञ छनौट गर्नुहुन्छ र चित्रकार होइन।
एक SEO विशेषज्ञ संग काम गरेर, तपाईं आफ्नो लक्ष्य समूह अझ राम्रो चिन्न सक्नुहुनेछ। एक विशेषज्ञ वा अनुभवी एजेन्सी सँधै कुञ्जी शब्द अनुसन्धान र प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान गर्दछ। यस तरीकाले तपाईं आफ्नो वेबसाइट र तपाईंको व्यापार अझ राम्रो जान्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई थाहा छ तपाईका ग्राहकहरु के खोज्दैछन् र तपाईले आफ्नो लक्षित समूह र व्यवसायमा राम्रो अन्तरदृष्टि प्राप्त गर्नुहुन्छ।
तपाईं गुगलमा कसरी उच्च गर्नुहुन्छ?
उत्तम पृष्ठ गुगलमा उच्चतम आउँछ, कम्तिमा सिद्धान्त अनुसार। अभ्यासमा, तथापि, यो प्राय: भिन्न हुन्छ र त्यो गुगलको एल्गोरिथ्मको कारणले हुन्छ। यो रोबोट द्वारा बनाईएको अवलोकनको आधारमा गणना गर्छ। सम्भाव्यता यो छ कि पृष्ठ राम्रो छ। यो एक सय भन्दा बढी पोइन्ट्समा मूल्या is्कन गरिन्छ र प्रत्येक पोइन्टको यसको मूल्य हुन्छ। केहि पोइन्टहरु अरुहरु भन्दा बढी गणना गर्दछ। तर कसरी तपाईं Google लाई थाहा छ कि तपाईंको पृष्ठ उच्च गुणवत्ता र प्रासंगिकताको हो भनेर कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ? तपाईं एक अधिकार बन्ने द्वारा कि प्राप्त।
एक प्राधिकरण तपाईको फिल्डको बारेमा जानकारीको एक विश्वसनीय स्रोत हो र कुन अन्य पृष्ठहरू सन्दर्भ गर्न मनपर्दछ।
तपाइँको वेबसाइट को लागी तपाइँको लक्षित दर्शकहरु को सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ, हरेक स्तर मा। र त्यसपछि यो डोमेन स्तर, वेबसाइट स्तर, र पृष्ठ स्तरबाट जान्छ। जानकारी सुवाच्य, सुलभ र राम्रो गुणको हुनुपर्दछ। गुगलले पूरै हेराई गर्दछ र पूरै राम्रो, तपाई पृष्ठ स्तरमा राम्रो स्कोर।
पहिले नै उल्लेख गरिए अनुसार एसईओमा विभिन्न चीजहरू हुन्छन् जस्तै कपिराइटि,, वेबसाइट अप्टिमाइजेसन, रूपान्तरण अप्टिमाइजेसन, अनलाइन मार्केटिंग, लिंक भवन, र अधिक। त्यसैले एक प्राधिकरण बन्न पक्कै एक दीर्घकालीन मुद्दा हो। निश्चित रूपमा सामग्री र तपाईंको पृष्ठहरूमा सन्दर्भ प्राप्त गर्न। आगंतुक प्रति आगंतुक तपाईंको पृष्ठ निर्माण हुनेछ।
अनुकूलन सुरु गर्नुहोस्
एसईओ एक धेरै व्यापक क्षेत्र हो, अब स्पष्ट हुन सक्छ। यससँग धेरै चीजहरूको साझा जमिन छ जुन सबैले गुगलको उच्च पदहरूमा पुग्न भूमिका खेल्दछन्। तर पहिले नै संकेत गरीएको सयौं पोइन्ट्स मध्ये, केहि सब भन्दा महत्वपूर्ण र पनि अधिक समय लाग्ने हो।
आवश्यक जानकारीको खोजीका साथ सुरू गर्न तपाईको ग्राहक वा खोजीकर्ता के खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए तपाईं अवतरण पृष्ठहरूको लागि पाठहरू लेख्नुहुनेछ जुन तपाईंको आगंतुकको मागको लागि ठीक जवाफ दिन्छ र तपाईं आफ्नो वेबसाइटको प्रयोगकर्ता-मैत्रीलाई अनुकूलित गर्नुहुनेछ। अन्तमा, तपाइँको वेबसाइट को ब्रान्ड जागरूकता एक प्रमुख चिन्ता हो। कसरी तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मा रेफरल प्राप्त?
एसईओको साथ सुरूवात कुञ्जी शब्द अनुसन्धान र वैकल्पिक रूपमा प्रतिस्पर्धी विश्लेषणको साथ सुरू हुन्छ। एसईओ अप्टिमाइजेसन एक लामो प्रक्रिया हो र धेरै समय लिन्छ, एक राम्रो मार्केटरले यसैले अनुमानहरूबाट कहिले पनि सुरू गर्दैन। तपाईंले अनुकूलनमा राख्नु भएको काम यसको लायक पनि हुनुपर्दछ। त्यसोभए यो लाजमर्दो छ यदि तपाईं गलत कुञ्जी शब्दहरूमा फोकस गर्नुहुन्छ, र यो एक शुरुआत गलती हो जुन प्राय: गरिन्छ। सब भन्दा लोकप्रिय कुञ्जी शब्द पनि प्राय: छनौट गरिएको हुन्छ, तर त्यहाँ खोजी खोजी मात्रा र यसैले प्रतिस्पर्धा पनि छ। यसैले विस्तृत कुञ्जी शब्दहरूको साथ १ नम्बरमा श्रेणीकरण गर्न अझ गाह्रो छ। त्यसोभए सानो सुरु गर्नुहोस्। कुञ्जी शब्द अनुसन्धानको बखत, तपाईं नक्शा बनाउन को लागी प्रयास गर्नुहोस् कि व्यक्ति कुन सर्त खोज्दैछ, कति पटक तिनीहरू अर्को खोज्छन्, र कुन अन्वेर्सिंग प्रश्न खोजीकर्तासँग छ। अनुसन्धानको बखत तपाईं निम्न कुरालाई ध्यानमा राख्न सक्नुहुन्छ:
खोजी गर्नेको मनसाय के हो? तिनीहरू किन यो कुञ्जी शब्द खोज्दै छन् र उनीहरूले के फेला पार्ने आशा गर्छन्?
म कसरी खोज क्वेरीलाई पूर्ण गर्न सक्छु? पृष्ठ आगन्तुकलाई कस्तो देखिनु पर्छ? प्रतिस्पर्धीसँग के छ र म के थप्न सक्छु कि उनीहरू हराइरहेको छ? शीर्ष स्थान कमाउन यसले के लिन्छ यसमा आलोचनात्मक नजर लिनुहोस्।
म कसरी यो सामग्री सिर्जना गर्न सक्दछु जुन खोजीकर्ताले आफ्नो नेटवर्कसँग सेयर गर्न चाहान्छ?
म कसरी यो स्पष्ट पार्न सक्छु कि म खोजी गर्नेलाई मद्दत गर्न सक्छु? निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ खोजीकर्तालाई तपाइँको पृष्ठको शीर्षकमा क्लिक गर्न मनाउन सक्नुहुन्छ।
र अन्तमा, तपाईले खोज अनुभवलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ, जस्तै प्रयोगकर्ता-मित्रता, वेबसाइट प्रवाह र डिजाइन।
SEO पाठ लेख्दै
उनीहरू भन्छन्, सामग्री राजा हो, र त्यो अब गुगलको एल्गोरिथ्म बीचमा बढ्दो सत्य हो। कोही गुगल मार्फत खोजी गर्न एक विशेष प्रश्न, आवश्यकता, वा समस्या छ। एक अनुकूलित पृष्ठको साथ, तपाईं खोजीकर्ताको आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुनेछ। र यसलाई पूरा गर्दै, तपाईं पाठ लेखेर गर्नुहुन्छ जुन राम्रोसँग पढ्छ, बुझिन्छ, र पाठकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। तिनीहरू पनि यस एसईओ copywriting कल।
SEO copywriting लेखनको एक तरीका हो जुन तपाइँ खोजीकर्ताको लागी मनमोहक र सजीलो पढ्न मिल्ने सामग्री सिर्जना गर्नुहुन्छ। यो गाह्रो छ! एकै साथ तपाईले गुगलको एल्गोरिथ्म र खोज सर्तहरू पनि ध्यानमा राख्नुहुन्छ।
जब तपाईं प्रतिलिपि अधिकारको साथ सुरू गर्नुहुन्छ, तपाईं दुबै बीच राम्रो डिभेंस हुनुपर्छ। तपाईं कीवर्ड स्टफिंगमा व्यस्त हुन चाहनुहुन्न, जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुञ्जी शब्दको साथ सामग्री भर्दछ।
गुणवत्ता सामग्री जीत! पाठ स्पष्ट छ र पाठकहरूलाई रहन्छ। गुगलले देख्दछ कि पर्यटकहरू तपाईंको पृष्ठमा कति लामो समय बसे र पढिएको सामग्री अधिकार प्रदान गर्दछ। तर गुणस्तर सामग्रीले फोटो, भिडियो, इन्फोग्राफिक्स, र सामग्रीका अन्य प्रकारहरू समावेश गर्दछ।
प्राधिकरण र लिंक भवन
खोजी इन्जिन एल्गोरिथ्मको लागि कुन वेबसाइटको अधिकार छ भनेर निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूले पाठ स्क्यान गर्न सक्दछन् र तपाईंको पृष्ठमा पर्यटकहरू कति लामो समय देखिन्छन्, तर तिनीहरूलाई सामग्रीको बारेमा केहि पनि थाहा छैन। गुगलले यसलाई पृष्ठको अधिकारबाट मापन गर्दछ, र यो एल्गोरिथ्मको मुख्य पोइन्टहरू मध्ये एक हो। प्राधिकरण डोमेन प्राधिकरण र पृष्ठ प्राधिकरण द्वारा मापन गरिएको छ। दुबै स्कोरहरू अनलाइन मार्केटिंग कम्पनी MOZ बाट आउँदछन्। अधिकार आंशिक रूपमा पृष्ठहरूमा सन्दर्भ द्वारा निर्धारित गरिन्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, यदि तपाईंको वेबसाइटसँग धेरै (गुणात्मक) सन्दर्भहरू छन् भने सामग्री पनि धेरै राम्रो हुनुपर्दछ। यो किनभने तपाईको पृष्ठ चाँडै निश्चित क्षेत्र मा 'अधिकार' को रूपमा उल्लेख छ।
जब तपाईले भर्खर आफ्नो वेबसाइटलाई अनुकूलन गर्न शुरू गर्नुभयो, सम्भावनाहरू केहि कम छ तपाईको भ्रमण गर्नेहरु। तर आगन्तुकहरू गुगलको लागि 'मापन' गर्न तपाईं कसरी प्रासंगिक हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण छ। जति धेरै आगन्तुकहरू प्राप्त गर्दछन्, त्यति नै प्रासंगिक हुनुहुन्छ। भाग्यवस, मापन पनि रेफरलको आधारमा लिईन्छ र यो एक अंश हो जुन तपाईं गुगललाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यी चरणहरू पनि भन्नुपर्नेछ, सुरुमा लिंकहरू वितरण गर्न र तपाईंको वेबसाइटमा व्यक्तिहरू लिनको लागि। यस प्रक्रियालाई लि building्क भवन भनिन्छ।
लिंक निर्माणका फाइदा र विपक्षहरू के हुन्?
तपाइँ तपाइँको ब्याकलिंक्स मा नियन्त्रण कायम
तपाइँ कसरी फेला पार्न चाहनुहुन्छ भनेर तपाइँ नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ
तपाईलाई थाहा छ तपाई कुन पृष्ठहरुमा हुनुहुन्छ
बैंक लिंकहरू गुणात्मक तरिकामा प्राप्त भएका छन्
तपाईंलाई थाहा छ लिंकहरू कुन प्रस context्गमा राखिएको छ
यो गहन प्रक्रिया हो। तपाईं स्वाभाविक रूपमा गुणात्मक ब्याकलिks्कहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईं अनुसन्धानको एक उचित मात्रा गर्न पर्छ। तपाईले त्यसपछि पृष्ठहरू लेख्नु वा कल गर्नुपर्नेछ।
यो कृतघ्न काम हुन सक्छ, तपाइँलाई लेख्न र तपाइँको वेबसाइटमा लिंक राख्न प्रशासकहरूलाई कष्ट दिनुपर्नेछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंलाई थाहा छ तपाईंले के भन्न लाग्नु भएको छ वा फिर्ती के हो।
यो सुनिश्चित गर्न गहन प्रक्रिया पनि हो कि गुगलले याद गर्दैन कि तपाईंले कृत्रिम ब्याकलिंकहरू पोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसोभए निश्चित गर्नुहोस् कि सामग्री फरक छ। तपाइँको ब्रान्ड, एक विशिष्ट कीवर्ड र केवल कुञ्जीशब्दको साथ तपाइँको ब्रान्ड बीचको सम्बन्धलाई विचार गर्नुहोस्। यस तरिकाले सन्तुलन रहन्छ।
सामग्री र लिंकहरूको अलावा, तपाईंको वेबसाइटको अप्टिमाइजेसन र सुधारले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। पाठको साथसाथै, तपाईले पृष्ठ शीर्षक, मेटा विवरण, URL, शीर्षक, र अन्य सामग्री जुन तपाइँले वेबसाइटमा राख्नु भएको छनौट गरिएको कुञ्जीशब्दहरू पनि प्रशोधन गर्नुहुन्छ।
यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले पृष्ठको लोडि time समय, रिडिरेक्टहरू, टुटेका लिंकहरू, र अनुक्रमणिका क्षमतालाई ध्यानमा राख्नुहुन्छ।
प्राविधिक रूपमा राम्रो अनुकूलित वेबसाइट राम्रो पाउनुको लागि महत्त्वपूर्ण आधार हो। उदाहरण को लागी, गुगल केहि पक्षहरु मा एक वेबसाइट मूल्यांकन गर्दछ। साथै, यो सम्भव भएसम्म कम्प्याक्टको रूपमा डेलिभर गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, यसले लोडिंग समयलाई पनि असर गर्छ। उदाहरण को लागी, HTML ट्यागमा आन्तरिक CSS अधिक से अधिक टाढा रहनु पर्छ।